Sebenzisa amakhonkco emsebenzini wakho, ngale ndlela imfutshane yekhibhodi yeMac | Ndisuka mac
Sebenzisa amakhonkco emsebenzini wakho, ngale ndlela imfutshane yekhibhodi yeMac
Kule mihla kuyasebenza kakhulu ukuba sisebenza noxwebhu oluza kusetyenziselwa thina okanye abantu besithathu, ukusetyenziswa kwamakhonkco. Kulabo abangaziyo ukuba yintoni ikhonkco, kubandakanya ukumakisha igama okanye amagama ukuze avele kwisicatshulwa, kwaye ucofe kuyo usebenze isenzo. Ngokwesiqhelo eli nyathelo lisithumela kwiphepha lewebhu kwaye kuvela ubuchule obukhulu beli nyathelo: Siza kudibanisa enye iwebhusayithi njengesixhasi solwazi lwethu, iphepha le-YouTube okanye inkonzo efanayo okanye ifoto okanye i-albhamu yevidiyo.
Kukho indlela emfutshane yokunqumlela ukusebenza kwi-Mac, ukuze sikwazi ukucela inkonzo ukuba isebenze nayo Amaphepha, amanani okanye uKhiye, kodwa naxa usebenza kwezinye izicelo ezivela kuzo zombini iApple kunye nomntu wesithathu. Kwaye amaphepha ewebhu: ii-imeyile, i-WordPress, i-intranet yenkampani, phakathi kwabanye.
Eli nyathelo kunye neendlela ezimfutshane zekhibhodi zenziwa ngolu hlobo lulandelayo:
Sivula usetyenziso okanye iphepha elifunwayo. Kumzekelo wethu siyifundisa ngamaphepha, kodwa ngokwenyani inokwenziwa ngayo nayiphi na enye into.
Sibhala isicatshulwa Inqweneleka njengoko siqhele ukwenza.
Sikhetha amagama okanye iseti ye Amagama esifuna ukuwasebenzisa ukudibanisa. Ukuba sisebenzisa amagama aliqela kwikhonkco lethu ukuba sibe neenqobo zokugweba, kufuneka zifumaneke emva kwenye.
Siphawula amagama nge-trackpad okanye imouse ngamagama / ngendlela efanayo naleyo senza ngayo xa sifuna ukukrwela igama.
Ngoku sisebenzisa eyethu indlela emfutshane eyakuba: Cmd + k.
Inyathelo elilandelayo lahlukile kwinkqubo esiyisebenzisayo, kodwa imenyu iya kuhlala ibonakala ecaleni kwegama nebhokisi engenanto ukufaka ikhonkco lethu. Kumzekelo wethu, ukuba sifuna ukudibanisa kwiphepha elikwi-Mac siza kubeka:
Ukubonisa: igama eligqanyisiwe ngekhonkco.
Qhagamshela ku: Kwimeko yethu, iphepha lewebhu, kodwa sinokubonisa ukuba basithumela i-imeyile kwidilesi esiyibonisayo.
Isixhumanisi: Sikopa iphepha esifuna ukunxibelelana nalo.
Ekugqibeleni, siqinisekisa isenzo ngokuya kwiphepha, kwezinye izicelo yamkela nje.
Kufuneka sazi kuphela into emasiyenze xa sifuna lungisa okanye ucime ikhonkco. Ungayiphinda inkqubo ukusuka kwindawo yesi-4, kodwa ngaphambi kokuqinisekisa (yiya kwiphepha) tshintsha ipharamitha oyifunayo okanye ususe ikhonkco ukuba ufuna inyamalale ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Sebenzisa amakhonkco emsebenzini wakho, ngale ndlela imfutshane yekhibhodi yeMac
Iimpawu ezinkulu ze-Keynote ezingaphantsi kwe-euro
I-Barcode Wizard + ivumela ukuba senze iikhowudi zebarcode